Lammiileen duudhaaleesaanii kaleessaa cimsachuu qabu
Lammiileen duudhaaleesaanii kaleessaa cimsachuu qabu Featured
Wayita pirezidaantonni naannolee lamaanii ibsa kennanitti
Ummanni bal’aa Oromoofi Somaalee Itoophiyaa aanaalee daangaa waliin qooddatanirra jiraatu barootaaf waliin jiraachaa, waliin hojjechaa, laga tokko waraabbataa gaddaafi gammachuu tokkummaan qooddachaa turaniiru.
Gaarummaafi jaalala waliif qaban agarsiisuufis waliin hiriiruun aantummaa biyyasaaniif qaban agarsiisaa kan yoona gaa'an yoo ta’u, waldhabdee tibbana daangaarratti uumameen lubbuun namootaa darbeera, qabeenyis barbadaa'eera.
Waldhabdee uumame kana furuuf qaamoleen mootummoota naannolee lamaanirraa walitti babba'an deddeebbiin marii gaggeessaa jiraatanis qaamonni nageenya naannolee kanneenii hinjaalanne miidiyaalee hawaasaa gara garaatti fayyadamuun maxxansaalee sobaa facaasuun garaa lammiilee booressuuf yaalii guddaa gochaa jiru.
Sababa eerame kanaan waanti uumame daran kan nama gaddisiisuudha. Lammiin heddu lubbuusaa dhabeera, qe’eerraa buqqa’eera qabeenya ofiirraa adda baheera. Inni hafes sodaadhaan liqimfamee jira.
Haala sukaneessaa kana jijjiiranii nageenya buusuuf tattaafachuun osoo barbaachisuu akka waan duguuggaan sanyii raawwataa jiruutti suuraalee taateewwan biyyoota biraa fayyadamanii rakkinicha babal'isuuf carraaquun dogoggora guddaa waan ta'eef adeemsisaa si'aayinaan sirraa'uu kan qabuudha.
Rakkoolee irra deddeebbiin uumaman kanneen sababa godhachuun walitti bu’insichi akka itti hinfufneef daandiilee guguddoon naannolee lamaan walitti fidan to’annoo kabachiistota nagaa federaalaa jala akka oolan ajajni Ministira Muummee Itoophiyaa biraa darbuun hojiirra oolee jira. Kanaanis tasgabbiin walduraa duubaan mula'achuurratti argama.
Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany ibsa tibbana miidiyaalee biyya keessaatiif kennan irratti dubbii dubbataniin qaamonni waldhabdee kanaaf ka’umsa ta'aniifi qooda fudhatan jechuunis hidhattootas ta’e namoota dhuunfaa akkasumas miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasan seeratti akka dhiyaatan ni ta’u.
Dhiimmi kun gadifageenyaan ilaalamee nageenyi akka bu’uuf ni hojjetama jedhanii, rakkinichi itti fufiinsa akka hinqabaanneef jaarsoliin biyyaa gama lamaan keessaa babahan nageenya buusuuf akka carraaqan gaafataniiru.
Gaaga’amni lubbuufi qabeenyarra gahe nama gaddisiisa kan jedhan Obbo Haylamaariyaam namootni dhuunfaas ta’e miidiyaaleen hawaasaa gochaa kana harbeessuun jeequmsicha babal’isuu akka hinqabne akeekkachiisaniiru.
Egaan dhimmi kun lammii biyya keenyaa mara biratti fudhatama argachuun karaa dhimmi kun tasgabbaa'ee raawwachuu qaburratti tumsi barbaachisu raawwatee lammiin biyyaa marti fuulasaa gara misoomaatti deebisuu qaba.
Pirezedaantiin Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa gamasaaniin ibsa waltajjicharratti kennaniin, nageenya naannoolee lamaanii boorahe kana bakkatti deebisuuf tumsi jaarsolii biyyaa murteessaa ta’uu yoo himan namoota qe’eerraa buqqa’an deebisanii hundeessuuf deeggarsi barbaachisaa taasifamuu akka qabu eeraniiru.
Kan buqqa'e bakkatti deebisuun gochaan raawwatame dogoggora ta'uusaa hawaasa hubachiisuudhaan hawaasni kanneen gochaa kana raawwatan lammata akka irra hindeebine hadheeffatee mormuufi murteetti dhiheessuudhaan ragaa itti ba'ee yoo too'ate malee tasgabbiin itti fufiinsa qabu argamuu hindanda'u.
Kanaaaf ammoo shoora guddaa taphachuu kan qabu manguddoolee biyyaati. Akka duudhaa naannolee lameeniittis ta'e akka biyyaatti, dogoggorri hawaasa keessatti uumame tokko, sirraa'uu kan danda'u adda durummaafi garakuuteenya gama maanguddootaatiin uumamuuni. Kanaafuu walitti bu'iinsa kana qabaneessuu keessatti jaarsoliifi durabuutota amantiirraa waan guddaatu eegama.
Waltajjii kanarratti ibsan kan kennan Pirezedaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Somaalee Obbo Abdii Mohaammad gamasaaniitiin, rakkoon waldhabdee daangaa sababa godhachuun ka’e kun afarsitoota ololaan deeggaramee akka babal’atu ta’aa jira jedhaniiru.
Akka Obbo Abdiin jedhanitti, miidhaan walitti bu’insa kanaan lammiilee Somaaleefi Oromoorra gahe gaddisiisaa ta’us nageenya kaleessa ture deebisnee lammii waldheessaa jiru kana walitti araarsuuf shoorri jaarsolii biyyaa jajjabaachuu kan qabuudha.
Saboonni lameen walfuudhanii, walirraa dhala godhatanii tokkummaan jiraachaa akka turanfi jiran kan himan Obbo Abdiin afaaniifi aadaan osoo wal hinqoodiin aadaa waldanda’uu dur horataniin waliin akka jiraataniif sosochiin nageenya buusuu gama lamaaniin hojjetamuu qaba jedhaniiru.
Walumaagalatti, ibsa tibbana hoggantoota mootummaa federaalaatiifi naannolee lameen irraa kenname kana haalaan hubachuuudhaan hojiirra oolmaasaatii ummanni martuu miira tokkoon yoo sochoo'e yeroo gabaabaa keessatti gochaa yaaddessaa ta'e kana haala lammeessoo irra deebi'amuu hinqabneen xumuruun ni danda'ama. Kanaafuu martuu gurmuu tokkoon ka'ee ergama misoomaasaa galmaan ga'uuf rakkoo nageenyaa kan ta'e walitti bu'iinsa hundeesaatii gogsuu qaba.
Torban kana/This_Week 33766
Guyyaa mara/All_Days 1625561